Umbuki zindwendwe ngu-La Hermandad - I-Airbnb
Umbuki zindwendwe ngu-La Hermandad
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Sandra María
Indlu enezitezi ezimbili, eyakhiwe ngamapulangwe, izinkuni nezitini nosimende. Ukubukeka kwayo okuyinhloko kuyi-rustic enezinkuni eziphelile.
Indawo yokuhlala esezingeni lesibili enamakamelo okulala ayi-5, amathathu awo anendlu yokugezela yangasese, ikhishi kanye negumbi lokugezela elijwayelekile. Indawo ekhanyayo futhi ejabulisayo etholakala emgwaqweni omkhulu kamasipala, ibhulokhi elilodwa ukusuka epaki laseBolívar kanye nesibhedlela.
Umasipala wase-Ulloa unelungelo lokuba senkabeni yesifunda sekhofi nokuba ngomunye wemincane nethule kakhulu, sinehora elingaphansi kwehora ukusuka emadolobheni amakhulu alo mkhakha (Pereira, Armenia naseCartago).
Indawo yokulala iyamangalisa kakhulu ngokuqedwa kwayo okulula futhi okune-rustic okhunini olugugile, ngaphezu kwalokho, ukukhanya kwayo okuhle kanye nokusha okuzwakala ezikhungweni zayo. Ngaphandle kokungabaza indawo lapho umuntu angakhululeka khona futhi angenwe wumoya kamasipala wobuzalwane.
Nakuba umasipala uthulile, indawo yokulala isemgwaqweni omkhulu ibhulokhi elilodwa ukusuka epaki eliyingqayizivele, kule ndawo sithola izitolo ezinkulu, amathilomu kanye nezindawo zokudlela.
Ibungazwe ngu-Sandra María
Soy docente de preescolar tengo 47 años, soy natural y resido en el municipio de Ulloa - Valle del Cauca. Me gusta conocer nuevas personas y me gradan mucho los niños.
Ngiwumuntu ozimisele ukusabalalisa izinto ezikhangayo zikamasipala futhi nginikeze umhlahlandlela ngendawo, ngithanda ukuzijabulisa nokuhlangana nabantu abasha